Nbudata Boeing B-52 Stratofortress Alphasim FSX SP2 & P3D - Rikoooo
downloads 26 747
Onye edemede: Alphasim & Steve Hess
Emelitere na 03 / 11 / 2012: Dozie nke engine anwụrụ ọkụ na-egosipụta ekwesị kama ịgbasapụ. Nke a bụ Alphasim B-52 Bombardier gbanwetụrụ maka FSX SP2 /P3D gụnyere ụdị abụọ B-52G na B-52H na ederede isii, tinyekwara ọkaibe 3D cockpit (VC) na ụda olu omenala 2D maka B-52. Pịa Ctrl + W iji mepee bọmbụ na ịgbanwee + E maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ (lee ntuziaka maka nkọwa ndị ọzọ). Ọ bụ nnukwu igwe na ịchọrọ oghere maka iwepụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị kwụjuru ya na mmanu. Na-etinye animations su dika co-pilot animated, anwụrụ ọkụ, nku na-agbanwe agbanwe wdg O nwere ụdị ụgbọ elu dị elu wich bụ ihe dị adị.
The Boeing B-52 Stratofortress bụ a ogologo nso, subsonic, ugboelu-kwadoro emeri na otu bombu. The B-52 e mere na wuru Boeing, bụ ndị nọgidere na-enye nkwado na upgrades. Ọ na-e ejikwara site United States Air Force (USAF) ebe ọ bụ na 1950s. The otu bombu eburu ruo 70,000 pound (32,000 n'arọ) nke ngwá agha.
Na-amalite n'ebe ihe ịga nke ọma nkwekọrịta ikele na June 1946, ndị B-52 imewe ghọrọ usoro si a ogologo-nku ugbo elu-kwadoro site na isii turboprop engines ikpeazụ prototype YB-52 na asatọ turbojet engines wee kpochapụ nku. The B-52 were ya, nwa agbọghọ ụgbọ elu na April 1952. Wuru na-ebu ngwá agha nuklia maka Agha Nzuzo-oge deterrence ọzọ, ndị B-52 Stratofortress dochie Convair B-36. Ọ bụ ezie na a vetiran soja nke ọtụtụ agha, ndị Stratofortress emewo ama esịn naanị ot munitions mgba ahụ. Ya Stratofortress aha na-adịkarịghị eji na mpụga nke ukara ebube; ọ na-e zoro aka na Air Force pesonel dị ka buff (Big jọrọ njọ Abụba / efe Fucker / Ụmụnna).
The B-52 anọwo na-arụsi ọrụ ike ọrụ na USAF ebe ọ bụ na 1955. The atụ bọmbụ ama n'okpuru Strategic Air Command (nwa) ruo mgbe e disestablished na 1992 na ya ugbo elu etinye obi gị dum n'ime Air ọgụ Command (ACC); na 2010 niile B-52 Stratofortresses e zigara si ACC ndị ọhụrụ Air Force Global Ebu Command (AFGSC). Elu arụmọrụ na elu subsonic gbapụrụ ọsọ na dịtụ ala operating akwụ ụgwọ na edebewo B-52 na ọrụ n'agbanyeghị biakwa obibia nke e mesịrị ugbo elu, gụnyere kagbuo Mach 3 North American XB-70 Valkyrie, ndị variable-jiometrị Rockwell B-1B Lancer, na stealthy Northrop Grumman B-2 Spirit. The B-52 akara ya 50th ncheta nke na-aga n'ihu ọrụ ya mbụ ọrụ na 2005 na mgbe a kwalite n'etiti 2013 na 2015 ọ ga-eje ozi n'ime 2040s. (Wikipedia)